महिनावारी हुदाँ कसरी स्वच्छ हुने हेरौ ,..,. – News Nepali Dainik
महिनावारी हुदाँ कसरी स्वच्छ हुने हेरौ ,..,.
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १७, २०७७ समय: २१:२१:५६
काठमाडौं – महिनावारी शारीरिक परिवर्तनमध्येको एक परिवर्तन हो । यो हाम्रो शरीरमा भएका रागरसहरूको मात्रामा आउने परिवर्तनका कारणले हुने गर्दछ । महिनावारी प्राकृतिक सरसफाइ प्रक्रिया हो र महिनावारी हुनु भनेको एउटी केटी हरेक महिना गर्भवती हुन तयार हुने सङ्केत हो ।